टिकटक स्टार सिया कक्कडको आत्मह-त्याको रहस्य खुल्यो – Sandesh Munch
July 2, 2020 168
एजेन्सी – टिकटक स्टार सिया कक्कडको देहत्यागको खबरले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । उनले किन यस्तो कदम उठाइन् भनेर कसैले अझसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । सिया सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने गर्थिन् । उनी निककट भविष्यमा नै ठूलो प्रोजेक्टमा देखिने तयारीमा थिइन् तर उनले यस्तो गरिन् ।उनले देहत्याग गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि टिकटकमा केही भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । ती भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन् ।
पछिल्लो अनुसन्धानका अनुसार टिकटकमा भाइरल भएकी सियालाई विभिन्न प्रकारका ध म्की आइरहेका थिए । यद्यपि, उनको घटनाको विषयमा प्रहरीले केही तथ्य बाहिर ल्याएको छैन । स्टार शिवानीको उनकै सैलूनभित्र उनकै साथीले ज्यान लिएका छन् ।आइतबार शिवानीकी साथीले सैलुन खोल्दा त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र बेड खोलेर हेर्दा शिवानीको शव भेटेको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले बताएको छ । स्रोतका अनुसार शिवानीका साथीले घाँटीमा दाग देखेका थिए र उनको मोबाइलसमेत गायब थियो । प्रहरीले पिताको बयानको आधारमा आरिफ नामका एक व्यक्ति विरुद्ध मु-द्दा दर्ता गरेको छ । प्रहरीका अनुसार ह त्या दुई दिनअघि भएको थियो ।
Prevआत्मह’त्या गरेकाे भिडिओ हटाउन फेसबुकलाई पत्राचार
Nextदुर्गेश थापाको “बिच्च बिचमा २ ” सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस् )
यी हुन् युवतीमा हुनुपर्ने ३२ गुण: तपाईसँग छन् त ?
श्रीमानको अगाडि श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी २० कुरा नत्र…
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9906)